प्रशंसापत्र चिंता र कम मूड - जिउँदो मन - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
प्रशंसापत्र चिन्ता र कम मुड
किम ड्यूसबाट प्रशंसापत्र
मैले यो अद्भुत प्रयोग गरिरहेको छु अडियो-दृश्य प्रविष्टि पछिल्ला केही हप्ता उपकरण! को डेभिड प्रसन्न मलाई दैनिक ध्यानमा फर्किन मद्दत पुर्‍याएको छ र म तनाव कम गर्नेमा ठूलो भिन्नता देख्छु, र बढी आराम पाएको महसुस गर्दछु।
डा। मेरीना भ्यान डेर बर्ग, पीएचडी बाट प्रशंसापत्र
मार्क थॉमस बाट प्रशंसापत्र
म भर्खरको उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र अनुभवको बारेमा समीक्षा लेख्न चाहन्थें जो डेभिडको लागि माइन्डमैचिनेस डट कममा माइकलबाट मैले प्राप्त गरे प्रसन्नता प्रो.
पहिलो, डेभिड प्रसन्नता प्रो एक आश्चर्यजनक उपकरण भएको छ। मेरो न्युरोफिडब्याक चिकित्सकले भने कि न्यूरोफिडब्याकले ममा काम गर्दैन किनकि म बेंजोडाइजेपाइन लिइरहेको थिएँ र वास्तवमा मैले न्युरोफिडब्याकबाट फरक देखिन। हामी session सत्र पछि छोड्छौं।
यसको विपरित रूपमा, मैले धेरै भिन्नताहरू देखेँ जुन मैले मेरो DAVID लाईट प्रो TruVu चश्माको साथ पाएँ। मैले धेरै बर्षसम्म महसुस नगरेको भावनाहरू महसुस गरें। म वास्तवमा मेरो शरीरलाई शान्त गर्न सक्छु। मेरो दीर्घकालीन गम्भीर उदासीनता सकियो। मेरो नकारात्मक आत्म-कुरा एकदम कम भएको छ। म स्तुति गर्दछु र मौनताको आनन्द लिन्छु। म बाहिर धेरै सुन्दरता देख्छु। म क्षणमा अधिक उपस्थित छु। आदि।
माइकलले मलाई धेरै मद्दत पुर्‍याएको छ, मेरो धेरै कलहरूको जवाफ दियो र मेरा धेरै प्रश्नहरू लिए, र अझ धेरै दयालु र इमानदार भएको छ। म उहाँलाई उदार र काम गर्न को लागी दुबै पाउन। एक व्यापारी संग कुरा र यो इमान्दारीपूर्वक विश्वास उसले तपाईको लागि के राम्रो छ के राम्रो लाग्छ र म त्यो विभाग मा skeptical पक्ष मा छ खुसी छ। यसबाहेक, माइकल डेभिड डिलिटा प्रोको निर्माता होइन त्यसैले तपाईं अन्य उपकरणहरू र डेभिड डिलिट प्रोको बारेमा खुल्लमखुल्ला बोल्न सहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
म हाम्रो कुराकानी को लागी धेरै आभारी छु र धेरै सिकेको छु।
धन्यबाद, माइक! धन्यवाद Mindmachines! र धन्यवाद Mindalive! उनीहरूको ग्राहक सेवा पनि उत्कृष्ट छ।
मलाई यो समीक्षा लेख्नको लागि सोधेन वा केहि पनि प्रस्ताव गरिएको थिएन।
ओलम्पिक पदक विजेता, र लेखक क्याथरिन गार्साउबाट प्रशंसापत्र पानीको बाहिर पौडी खेल्ने
म इमानदारीता बिना मेरो बाँच्न सक्दैन डेभिड प्रसन्न प्रो। यसको CES एक्लै कार्यले अमेरिकी मोडेलको गुणस्तर पार गर्छ! तर यति धेरैको साथ एक उपकरण छ! यो एक उत्तम फ्यूजन CES र अडियो र दृश्य प्रविष्टि। म यो उपकरण अरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम छु। मेरो श्रीमान् वायुसेनाको २ 23 बर्षे अनुभवी हुनुहुन्छ र युद्धबाट घर फर्केका वेटरनहरूसँग काम गर्छन्। यो यति धेरै मूल्यवान हुन्छ PTSD vets को लागी पीडा र उदासी कम गर्न को लागी मद्दत गर्न र आफ्नो मानसिक ध्यान फिर्ता लिन। यसले मलाई डिप्रेसन र फाइब्रोमाइल्जिया दुखाइका साथै मेरो लागि पनि सहयोग पुर्‍यायो एडीएचडी। धन्यबाद, मैले यो आश्चर्यजनक कम्पनीको बारेमा थाहा पाइन!
राम्रो नयाँ वेबसाइट। यो स्पष्ट छ कि धेरै समय र प्रयासले यसलाई सिर्जना गर्‍यो। मलाई विशेष गरी अनुसंधान खण्ड मनपरायो - पुरानो साइटमा फेला पार्न गाह्रो भयो। Kudos शामिल सबैलाई। नयाँ साइट राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ मन जिउँदो.
म तपाईंलाई यो पनि भन्न लेख्दै छु कि म ब्रेन बूस्टर # १ प्रोग्राम प्रयोग गर्दै छु तनाव नियन्त्रणको लागि र परिणामहरू चमत्कारीको केहि कम भएन। म मेरो वृद्ध आमाको हेरचाहबाट अत्यन्तै तनावग्रस्त छु, केहि मिनेट भन्दा बढी समय बस्न पाउँदैन त्यसैले ध्यान वा उपकरण प्रयोग गर्ने कुनै मौका छैन। मैले बिहान यो प्रयोग गर्न सुरु गरें जब म पहिलो उठें र एक हप्तादेखि १० दिन भित्र मैले महसुस गरें कति शान्त महसुस गरें। यो तनाव बाट २ भावनात्मक बिच्छेदन पछि मेरो लागि जीवन बचाउने हो।
क्यान्डिज लेनिंजर, एमएस, एनसीसी, GCDF, LPC
"न्यान्सी र डेभ लाई बधाई छ। हामी अझै तपाईका उत्पादनहरूलाई माया गर्दछौं। म सेवाका सदस्यहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई हरेक हप्ता AVE र CES सँग परिचय गराउँछु। तपाईंको सबै महान काम को लागी धन्यवाद। "
केविन पी बाट प्रशंसापत्र
ब्रुस जीबाट प्रशंसापत्र
"म यस प्रयोगको बारेमा अनिश्चित थिएँ ओएसिस प्रो सुरुमा, तर दुई हप्ता भित्र मेरो मुड सुधार भएको देखिन्छ र मैले त्यसबेलादेखि पछाडि फर्केर हेरेको छैन। ”
“द्विध्रुवीय उदासीनता र दुखाइमा मद्दत पाउन मैले डा। Saunders सँग भेट लिएँ। मैले १ 15 बर्ष भन्दा बढी संघर्ष गर्नु परेको छ र राहत खोज्न सबै प्रयास गरेको छु। टीडीसीएस र सीईएसको साथ डा। Saunders बाट मद्दत प्राप्त गरेको केही महिना भित्र, मेरो अवस्था पूर्ण छुट छ। मैले मेरो जीवन फिर्ता पाए! म बढी आभारी हुन सक्दैन! डा। Saunders एक सबै भन्दा दयालु, सकारात्मक, र अंतर्दृष्टि चिकित्सक हो मलाई थाहा छ। उहाँ मेरो रिकभरी यात्रामा मलाई प्रोत्साहनको ठूलो स्रोत हुनुहुन्छ। उनले मलाई गहन ज्ञान, विशेषज्ञता, र मस्तिष्क प्रशिक्षण र उपचारको शक्तिको बारेमा प्रशिक्षण दिएका छन् जसले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरेको छ। म सहयोगको लागि टीडीसीएस र सीईएस स्वास्थ्यका लागि प्रयोग गर्न सक्षम छु भन्नेमा म विश्वस्त छु। म धेरै कृतज्ञ छु कि डा। Saunders म मा विश्वास। म स्वतन्त्र, बलियो, र सशक्त भएको पूर्ण महसुस गर्दछु। म डा। Saunders लाई अत्यधिक उपचार र प्रोत्साहन को आवश्यकता को लागी सिफारिस गर्दछु। "
"म डेभिड प्रयोग गर्दछ मलाई मलाई काममा राख्न र एक दिन व्यापारी लगानीकर्ताको रूपमा, मेरो ट्रेडिंग प्रदर्शनको शीर्षमा। त्यहाँ मानसिक ट्रेडिंग कोचहरू छन् जसले समान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छन् तर यसले to देखि months महिना सम्म लिन सक्दछ र हजारौं डलर खर्च हुन्छ। डेभिडको प्रयोग गरेर, म केही हप्तामा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्षम भएँ र डेभिड प्रयोग गर्दा मलाई 'मानसिक' ट्युनमा राख्दछ। म हरेक दिन मेरो डेभिड प्रयोग गर्दछु। "
"द डेभिड प्रसन्न अचम्मको छ म परिवर्तन देखीरहेको छु। मैले हिजो नै सीईएस प्रयोग गरें र वाह, यसले मलाई शान्त गर्यो! डिलिट प्रो का सबै सुविधाहरू अविश्वसनीय छन्। तपाइँको उत्पादन को लागी धन्यवाद। "
जय किंग्सबरोबाट प्रशंसापत्र
नोभेम्बर 9, 2009
“मैले मेरो DAVID गत हप्ताको बिहिबार प्राप्त गरेको छु र पाँच सत्रहरू प्रयोग गरेको छु। त्यो छोटो अवधिमा मैले मेरो मुडमा नाटकीय सुधार देखेको छु। म मेरो जीवनको अधिकांश डिप्रेसन र एसएडीबाट ग्रसित छु। वर्षको यस पटक, म बिहान उठेर बच्चाहरूलाई स्कूल जान र आफ्नै दिन सुरु गर्न संघर्ष गर्दछु। मैले कर्पोरेट अमेरिकालाई घरबाट काम गर्न छोड्नु परेको छ किनकि बिहान कत्ति गाह्रो हुन सक्छ। एक लामो समय मा पहिलो पल्ट को लागी म (: !० मा उठे (एक घण्टा आधा भन्दा पहिले मलाई उठ्न को लागी) र ताजा र जीवित महसुस! मसँग एकान्त कफीको कफीको लागि समय थियो। यो केहिको लागि सानो कुराको रूपमा लाग्न सक्छ, तर मेरो लागि यो जीवन परिवर्तन हो र मेरो आँखामा आनन्दको आँसु ल्यायो। धेरै धेरै धन्यवाद! "
एलेनोर म्याकोवायबाट प्रशंसापत्र
"म २००१ पछि डेभिडको प्रयोगकर्ता भएको छु। आठ वर्ष पहिले लामो अवसाद पछि मलाई बाइपोलर पत्ता लागेको थियो। म मेरो चिकित्सक द्वारा DAVID लाई परिचय गराएको थियो र केही दिन विफल बिना हरेक दिन एक सत्र प्रयोग गर्‍यो। त्यस समयमा मैले महसुस गरें कि सत्रहरू बिना म कहिल्यै बाँच्दिन, जसले मलाई लिइरहेको औषधी घटाउन सक्षम बनायो। वर्षौंदेखि, मैले याद गरें कि मनीलिया नियन्त्रण गर्न औषधीहरूको मद्दत बिना नै मेरो द्विध्रुवीय मुडहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम भएको छु। म पछिल्लो दुई बर्ष देखि स्नातक स्कूल मा एक सिधा एक विद्यार्थी भएको छु। म अरूलाई द्विध्रुवीय मुडहरूको लागि DAVID लाई विचार गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहान्छु। डेभिडले मलाई द्विध्रुवीको साथ बाँच्न कसरी मद्दत गरेको छ भन्ने बारे कोही पनि छन् भनेर म जवाफ दिन खुशी हुन्छु। तपाई र तपाईको कम्पनीले गरेको सबै कुराको लागि धन्यबाद! "।
जुन 25, 2008
"२००//२००2003 मा धेरै तनावको साथ कडा परिश्रम पछि एक पटक म चिढचिढ्ने, तर्कहीन व्यवहार, मुड बदल्न र पुरानो थकान साथै वास्तविक शारीरिक गुनासो संग एक डिप्रेसन विकसित। यो केहि समय सम्म चल्यो जब म स्वीकार गर्न तयार छु पहिले केहि गलत थियो जुन मैले ह्यान्डल गर्न सकेन। मेरो चिकित्सकको निदान बर्नआउट / डिप्रेसन थियो। मलाई प्रोजाक र थेरापी दिइयो। केही हप्ता पछि मैले केही सुधार महसुस गरें। जे होस्, मुड स्वि sw्ग र थकान मिल्दैनथ्यो, काम र घरको स्थितिमा अतिरिक्त तनावका साथ। मैले सोचें कि म यसलाई रोजगारदाताहरू स्विच गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छु। प्रारम्भमा यसले काम गर्यो, तर केही समय पछि मैले (र मेरो वरपरका मानिसहरूले) फेरि विस्थापन देखे।
मैले पेशेवर सहयोग खोजें र क्लिनिकमा उत्रें जहाँ मैले थेरापी र बायोफिडब्याक प्राप्त गरें। परिणाम सकारात्मक थियो, तर क्यू-ईईजी स्क्यानले मस्तिष्कमा विशेष असंतुलन देखायो, विशेष गरी अगाडिको बाँया मस्तिष्क गोलार्धमा, जसले ढिलो गतिविधिको गतिविधि देखायो।
यो अनुसन्धान पछी मलाई न्युरोफिडब्याक सत्रहरूको मात्रा पार गर्न सल्लाह दिइयो। जे होस्, यो व्यावहारिक थिएन किनकि मेरो लगातार विदेश भ्रमणको कारण र पछि एक डेभिडको साथ AVE को विकल्प सुझाव दिइयो। सतर्कता बीटा पर्कर सत्रको साथ प्रशिक्षण गरिएको थियो। सुरुबाट मैले प्रत्येक बिहान यो गरें। मैले आधा घण्टा अघि अलार्म सेट गरें र ओछ्यानमा ढल्किरहेको बेला सत्र चलाएँ। परिणाम तुरुन्त आश्चर्यजनक थियो। शुरुमा मैले मेरो टाउकोका केही क्षेत्रहरु आरामले तातो भएको महसुस गरें र सत्र समाप्त भएपछि म साँच्चिकै सतर्क र जागृत भएको थिएँ जुन मैले लामो समयदेखि अनुभव नगरेको थिएँ। थप म दिउँसोको अन्त्यमा केही समयको लागि डिप्रेशन रिडक्शन सेसन चलाएँ। यो पनि राम्रोसँग काम गर्‍यो। दिनको अन्त्यमा गम्भीर थकान चाँडै कम भयो र मैले राम्रो र राम्रोको साथसाथै बढी आराम महसुस गरें। सत्रको आरामदायी नतिजा यति सहमत थियो कि मैले दिनको अन्तमा सत्र चलाइरहेको छु।
मैले धेरै महिनासम्म यी सत्रहरू गरिसकें र मैले मेरो समग्र कल्याणको लागि उल्लेखनीय सुधार गरेको देखें। मेरो वरपरका मानिसहरूले प्रगति याद गरे। डेभिड यति व्यावहारिक छ किनकि मैले यसलाई (ब्यापार) यात्रामा लिन सक्थें, र त्यसैले म मेरो सत्रहरू जारी राख्न सक्षम भएँ।
केही छ महिना पछि मेरो डिप्रेसन र थकान गए। वर्तमानमा म गम्भिर रूपमा Prozac को राशि कटौती गर्न सक्षम छु। क्लिनिकका मनोचिकित्सकले मलाई अर्को क्यू-ईईजी स्क्यान लिन सल्लाह दिए कि कुनै मापनयोग्य परिवर्तन छ कि छैन भनेर। यो वास्तवमा मामला थियो। दुई मस्तिष्क गोलार्ध र ढिलो ब्रेनवेभ क्रियाकलाप बीचको असंतुलन हराइसकेको छ। मैले महसुस गरेको कुराको पुष्टि भएकोमा म धेरै खुसी भएँ। म अझै जाग्न र सतर्कता महसुस गर्न PAL हप्ताको अवधिमा प्रयोग गर्दछु, यद्यपि मलाई लाग्छ मलाई वास्तवमै यसलाई आवश्यक छैन। म अझै C4 सत्रहरू चलाउँछु तर केवल आरामको मजाका लागि। म मेरो जीवनको आनन्द लिन्छु र प्रशस्त उर्जा पाएको छु।
यो लगभग अविश्वसनीय हो कि यस्तो साधारण समाधानको त्यस्तो प्रभाव हुन सक्छ। यस प्रविधीले गोलीहरु निगलने भन्दा धेरै राम्रो काम गर्दछ। यसबाहेक: एन्टिप्रेप्रेसन लिनेले कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन। "
JG बाट प्रशंसापत्र
"मलाई यो डेभिड मन पर्छ! मलाई CES मन पर्छ। म यसलाई हरेक दिन प्रयोग गर्छु। म चिन्ता लिनु अघि औषधीको विचार गर्नु अघि म यसको बारेमा सोच्छु। मुटुको धडकन ध्वनि सुखदायक र सहयोगी छ। तपाइँको अद्भुत उत्पादनको लागि फेरि धन्यवाद !!! "
श्री जे। क्लीफम्यानबाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 28, 2006
“भर्खरै मैले मेरी श्रीमतीको लागि डेभिड किनें। दुई महिना भित्र DAVID को उपयोग को प्रभाव एक चमत्कार हो। मेरी श्रीमतीलाई गम्भीर समस्याहरू (डिप्रेसन) थियो, विगत तीन बर्षदेखि अपर्याप्त नतिजाहरूको उपचार गरीरहेको थियो। डेभिडको दैनिक प्रयोगले उनलाई पूर्ण 'नयाँ' श्रीमतीमा परिणत गर्‍यो। परिणाम आश्चर्यजनक छन्। उनको डाक्टरहरू के भयो विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले मैले हाम्रो डेभिड परिचय गराएँ। उनीहरू धेरै इच्छुक छन्। ”
डरेल Hute III बाट प्रशंसापत्र
जुन 3, 2005
"म यहाँका सबै स्टाफलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मन जिउँदो यस्तो अद्भुत AVE उपकरण विकासको लागि। यसले मलाई प्रभाव पारेको छ कुनै पछि छैन! म DAVID प्रयोग गर्दैछु मेरो न्युरोफिडब्याक सत्रहरूमा, र परिणामहरू उल्लेखनीय छन्! यो अत्यन्त राम्रोसँग काम गर्दछ, र मेरो धेरै लक्षणहरूको साथ मद्दत गर्दछ जुन मेरो OCD (ओब्सिसिभ कम्पल्सिव डिसअर्डर) को साथ देखा पर्दछ। म वास्तवमै एकदम शकित भएँ कि मैले प्रयोग गरेको पहिलो पटक यसले कति राम्रो काम गर्यो, किनभने यसले मलाई शान्त बनायो। मेरो अर्को न्युरोफिडब्याक सत्रमा जाँदा, मलाई याद छ निराश धेरै को तनाव र चिन्ताको साथ। दिमागमा यो साथ, मैले मेरो चिकित्सकलाई सोधें कि के हामी DAVID फेरि प्रयोग गर्न सक्दछौं किनकि यो पहिलो पटक यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, र हामीले त्यसो गर्यौं। मेरो सत्र सकिएपछि, मलाई ठूलो लाग्यो! तनाव, चिन्ता र उदासिनता सबै गए! DAVID को उपयोग गर्नु अघि मैले त्यस दिन लक्षणहरू पाइनँ! म विस्मय भएको थिए र मैले भर्खरको अनुभव गरेको कुरा पत्याउनै सकेन! मैले यसलाई मेरो अर्को जोडी न्युरोफिडब्याक सत्रहरूको लागि प्रयोग गरें र यसले लगातार काम गरिरहेको हुनाले मैले आफैंको लागि एउटा पाउनुपर्ने थियो, जुन मैले गरेको कुरा नै थियो। मैले DAVID खरीद गर्‍यो र अब यो घरमा केहि समयको लागि प्रयोग गरिरहेको छु, र मैले प्राप्त गरेको अचम्मको नतिजाबाट म खुशी हुन सक्दिन। म मेरो ओसीडी (ओब्सिसिभ कम्पल्सिव डिसअर्डर) को साथ राम्रोसँग काम गर्ने उत्पादन प्राप्त गर्न धेरै आभारी छु र आभारी छु र म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। मन जिउँदो मलाई मात्र मद्दतको लागि होइन, तर अन्य धेरै मानिसहरूलाई पनि। अचम्मको काम जारी राख्नुहोस्! "
मार्गरेट O'Connor बाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 12, 2002
“मैले डिसेम्बर २००१ देखि डेभिड प्रयोग गरिरहेको छु र यसले मेरो जीवनमा गहिरो प्रभाव पाएको छ। एकाई प्रयोग गर्नु अघि, म चिन्ता र उदासिनताको साथ संघर्ष गर्दै थिएँ। मैले युनिटको प्रयोग गर्न शुरू गरेदेखि नै भावनात्मक तवरमा सन्तुलित मात्र भएन तर मलाई बढी उत्साहित महसुस भयो। म कल्याणको नयाँ अनुभूतिबाट पनि आनन्द लिन्छु जुन मैले आफ्नो जीवनमा कुनै समयको लागि लामो महसुस गरिनँ। म मेरो जीवनको आनन्द लिइरहेको छु जस्तो पहिला कहिल्यै भएको थिएन।
मैले २००१ को गर्मीमा उत्तर खोज्न सुरु गरें, जब म लामो अवधिको लागि डिप्रेसनको अनुभव गर्दै थिएँ। मैले मेरो डाक्टरलाई आँसुले बोलाएको थिएँ, यसो भन्दै मलाई मेरो छालाबाट बाहिर निस्केको जस्तो लाग्यो। म 2001१ बर्षको भएँ र मलाई थाहा थियो कि मेरो शरीरले केही हार्मोनल परिवर्तनहरू अनुभव गर्न थाल्छ। यी परिवर्तनहरू ट्र्याक गरेपछि, म मेरो मासिक चक्रको साथ एक ढाँचा देख्न सक्दछु। किनकि म धेरै स्वास्थ्यप्रति सचेत छु, म मेरो चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि सेवन गर्ने सल्लाह अनुसरण गर्न चाहेनन्। यो मैले लिन चाहेको विकल्प थिएन। त्यसैले मैले विकल्पहरू खोज्न थाले। मलाई पनि थाहा थियो कि मसँग एसएडी (मौसमी असरदार डिसआर्डर) छ, र मलाई लाग्यो कि लाइट थेरापी दुबैको लागि उत्तर हुन सक्छ।
मैले मेरो एक साथीलाई भनेको थिएँ कि म लाइट भिजरमा लगानी गर्ने बारेमा सोच्दै छु। उनले मलाई डेभिड प्याराडाइजको बारेमा बताइन् र कसरी अध्ययनहरूले यसलाई लाइट बक्सहरू वा भिजरहरू भन्दा प्रभावकारी देखाउँदछ। म एक हप्ताको लागि एकाई प्रयोग गर्न सक्षम थियो, र म बेचिएको थियो। तर म अझै थोरै शंकालु थिएँ। मैले धेरै प्रश्नहरू सोधें। यो एकाई सही जस्तो लाग्यो। यो धेरै सरल थियो। मैले आफ्नै लागि एउटा किन्ने निर्णय गरें र प्रत्येक दिन यसलाई प्रयोग गरें। काममा जानु भन्दा पहिले मैले हरेक बिहान यो प्रयोग गर्दछु। मसँग अधिक उर्जा छ र अझ स्पष्टसँग सोच्दछु। जीवन फेरि राम्रो छ र यो राम्रो हुन बन्द भएको छैन। म दिमाग र भावनाहरूको सन्तुलन अवस्थाबाट समस्याहरू हल गर्दछु। र म साँच्चै कृतज्ञ छु। "
एलन माउरोबाट प्रशंसापत्र
ब्लूमिंगटन, इन्डियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका
सेप्टेम्बर 30, 2003
"भर्खरै तपाईंलाई यस्तो महान उत्पादनको विकास गर्न बधाई दिन चाहन्छु!
मैले चिन्ता, त्रास, र उदासिनताका साथ वर्षौंदेखि पीडित छु, तर मैले यो साइट पत्ता लगाउन नसक्दासम्म मेरो समस्या सीधा मेरो दिमागको बायो-इलेक्ट्रिकमा रहेको असंतुलनसँग सम्बन्धित छ भनेर मैले महसुस गरें। र तपाइँको वेबसाइटको पूर्ण खोजी गरेपछि मैले महसुस गरें कि डेभिडसँग मैले खोजिरहेको कार्यक्रमहरू थिए। यस उपकरणमा तपाईंले डिप्रेसन प्रोग्राम मात्र राख्नुभएन, तर त्यहाँ धेरै संज्ञानात्मक कार्यक्रमहरू र विशिष्ट एडीडी कार्यक्रमहरू छन्। मेरो समस्याको हिस्सा धीमा ब्रेनवेभसँग सम्बन्धित भएको कारण मलाई थाहा थियो यो जाने इकाई हो।
मैले अगस्तको अन्तमा युनिट किनेको थिएँ र एक महिना पछि मात्र म इमानदारीसाथ भन्न सक्छु कि म ठूलो महसुस गर्छु। कुन प्रोग्राम सही हो भनेर पत्ता लगाउन केही समय लाग्यो, तर केही प्रयोगपछि म L10 / R18 कार्यक्रममा डिप्रेसनको लागि बसेँ, एडीडीको लागि सत्र प्रयोग गरेर सामयिक पूरकको साथ। मसँग पनि पुरानो CES एकाई छ जुन AVE उत्तेजनाको पूर्ण प्रशंसाको रूपमा देखिन्छ। सीईएस एक्लो प्रयोग गर्नाले मलाई कहिले पनि सन्तुलित हुन सकेन, तर डेभिडले त्यो सबै परिवर्तन गर्यो।
म डेभिडसँग अत्यन्तै खुसी छु र विश्वास गर्न सक्दिन केही सानो र प्रकाशले यति गर्न सक्दछन्… वास्तवमा जब मैले यसलाई बाकसबाट बाहिर निकालेको थिएँ भने म थोरै शंकास्पद थिएँ, कम्तीमा भन्नुपर्दा। अब म सतर्क छु, मसँग प्रशस्त उर्जा छ, र प्रायः म सन्तुलित र खुशी छु। एक महान उत्पादन को लागी धन्यवाद र राम्रो काम जारी राख्नुहोस्।
डेभिड रक्स! "
एन शुस्टरबाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 26, 1999
“म १ 17 वा १ years बर्षदेखि नै क्लिनिकल डिप्रेसनबाट ग्रसित छु र विभिन्न एन्टिप्रेसनसम्बन्धी सल्लाह लिइएको छु, सबैभन्दा भर्खर एफफेक्सोर हो। म एन्टी-डिप्रेससन्टहरू बाहिर जान असमर्थ छु किनभने जब म प्रयास गर्छु उदासी फिर्ता हुन्छ।
पछिल्लो नोभेम्बर र डिसेम्बर, मैले DAVID मा एक अनुसन्धान परियोजनामा ​​भाग लिए। मैले बिभिन्न सत्रहरू प्रयोग गरें र विशेष गरी एउटा सत्र मैले सबैभन्दा राम्रो महसुस गरें जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले यसलाई प्रयोग गरिरहें। यस सत्र प्रयोग गरेर करीव तीन देखि चार हप्ता पछि, म ठूलो महसुस गर्न थाले। मसँग धेरै उर्जा थियो र म सबै कुराको लागि उत्साहित र सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थें। मैले यति सकारात्मक महसुस गरें कि मैले मेरो एन्ट्रेस-डिप्रेसनन्टहरूलाई कम गर्न थालें।
त्यतिखेर मलाई पक्का विश्वास थिएन कि मेरो भलाईको बृद्धि भएको अनुभव डेभिडको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ वा यदि यो योग र रिलक्सन थेरापीको जवाफमा हो जुन मैले अघिल्लो जुलाईदेखि गरिरहेको थिएँ।
कल्याणको यो बढ्दो भावना डिसेम्बरको मध्यतिर सजीलो देखिन्छ। अध्ययनमा मेरो सहभागिता जनवरीको शुरुमा केही समयको अन्त्य भयो। डेभिड बन्द तीन हप्ता पछि, म मेरो सामान्य थकान फिर्ता भए पनि म मेरो औषधीको सामान्य रकममा फिर्ता थियो र मेरो योग र आराम गर्न जारी थियो।
मैले निष्कर्ष निकालें कि डेभिड ट्रिगर हो जसले मलाई एकदम राम्रो बनाएको थियो। यसैले मैले युनिट खरीद गर्ने निर्णय गरेको छु। मलाई लाग्छ यो इकाई, साथै उपचारका अन्य विधिहरू (योग, ध्यान, पोषण, व्यायाम, फिजियोथेरापी) को साथ, सबै सम्भावनाहरूमा, मलाई धेरै राम्रो महसुस गर्न सक्षम पार्दछ र म पनि डिप्रेसनको लागि औषधी सेवन हटाउन सक्षम हुन सक्छु।
यो अद्भुत उपकरण हो र म अरूलाई सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन। ”
Nora Gedgaudas बाट प्रशंसापत्र
मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका
जुलाई 28, 1999
“तपाईले कस्तो अद्भुत, शक्तिशाली र अत्यावश्यक टेक्नोलोजी विकास गर्नुभयो भन्ने कुरा सम्झना गराउन म यो लेख्न चाहन्थें। DAVID एक उपकरण हो कि अनटोडिभ तरिकाले मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको छ
मैले मेरो पछिल्लो 38 years बर्षको अतुलनीय डिप्रेसनको बन्धनमा बिताएको छु। आत्मघाती विचारधारा मेरो दैनिक सोच्ने प्रक्रियाको एक हिस्सा थियो। लगभग एक दर्जन (वा त्यस्तै) चिकित्सक, गुणस्तरीय पोषण हस्तक्षेप, व्यायाम तर्फ नियमित प्रयास, टोनी रोबिनसँग काम गर्ने, एनएलपी र अन्य दृष्टिकोणहरूको अध्ययन, असंख्य टेप प्रोग्रामहरू, मध्यस्थता, सम्मोहन, आध्यात्मिक अन्वेषण, बिभिन्न चिकित्सा विधिहरू, को साथ मनोवैज्ञानिक वर्षौं पछि। भिजुअलाइजेसन र एन्टीडिप्रेससन्टहरू (म भाग्यवशै आश्चर्यजनक संसाधन र दृढ रहिआएको हुँ) म अझै पनि एक कठोर कठोर अन्तर्क्रियाको साथ अडिग थिए जुन डिप्रेसन थियो। यो होइन कि यी अन्य हस्तक्षेपहरूले केही गरेनन् - विपरित रूपमा। यी हस्तक्षेपहरू मध्ये धेरैले मलाई ठूलो नयाँ आयाम, गहिराई, मानवतावाद र समझ दिए र सुधारको लागि सेवा दिएका छन, केहि अवस्थाहरूमा मेरो जीवनको गुणवत्ता। तर डिप्रेसनको एक फिजिकल कम्पोनेन्ट छ जुन यी अन्य चीजहरूले शारीरिक रूपमा संस्थागत तरीकामा सम्बोधन गर्न सक्दैन। पोषण र व्यायाम ज्यादातर प्रबन्धन उपकरणहरू थिए, औषधि मात्र लक्षण-राहतको प्रयास (जसले अन्ततः समाधान गरे भन्दा बढि समस्याहरू सिर्जना गर्‍यो)।
त्यसो भए, एक चमत्कारपूर्ण साँझ मैले नयाँ प्रकारको टेक्नोलोजीको बारेमा लेखमा ठोकर खाई जुन प्रकाश र ध्वनि (अडियो-भिजुअल उत्तेजना, वा AVS को रूपमा पनि चिनिन्छ)। मैले बायोफिडब्याक र अल्फा-प्रशिक्षणको बारेमा सुनेकी थिएँ, त्यसैले दिमाग राज्यहरूमा मेल खाने ब्रेनवेभको अवधारणा मलाई पूर्ण रूपमा विदेशी थिएन। मेरो टाउकोमा एक ज्योति गयो। अवश्य! यसले मलाई केवल यो महसुस गरायो कि यदि मेरो मस्तिष्कको बायोइलेक्ट्रिक कार्य बन्द छ - यदि मेरो मस्तिष्कको ब्रेनवेव गतिविधि बेवास्ता गरिएको थियो - त्यस्तै जैव रसायनशास्त्र हुनेछ। यस टेक्नोलोजीले मेरो सम्पूर्ण स्नायु प्रणालीलाई नवीकरण गर्ने र अन्तमा प्राप्त गर्ने र क्र्याक फाउन्डेशनको मर्मत गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्‍यो। यद्यपि म पनि शpt्कास्पद महसुस गर्न झुकाव थियो (जेड छैन भने) र केहि आयो कि केहि को बारे मा स्पष्टै निराशावादी, कि मलाई एक सानो अनुसन्धान गर्न बाट विफल भएन। मसँग कुरा गर्न को लागी देश (र क्यानाडा) को लागी जो कोहीलाई कल गर्न थालें। मैले पुस्तक, अन्य प्रकाशन र लेखहरूमा हात पाएँ र ती सब खाए। म विश्वस्त थिए यहाँ प्रयास गर्न लायकको केही थियो। मैले अलि बढी भूमिगत कार्य गरेँ र निर्णय गरेँ, तपाईको मेशिनमा सबै चीज हेरे पछि। यो स्पष्ट रूपमा अत्याधुनिक थियो र कुनै श doubt्का बिना कुनै पनि त्यस्ता अन्य AVS उपकरणको राम्रो अनुसन्धान गरियो। मैले तर्क गरें कि यदि म मेरो दिमागमा केही कुरा काट्न जाँदैछु भने, म यसलाई "ठीकसँग क्यालिब्रेट" भएको चाहन्थें। मैले कसैलाई भनेँ (मैले साथमा बसिरहेको व्यक्तिलाई बचाउनुहोस्) मैले के गरिरहेको थिएँ। मैले केवल DAVID लाई अर्डर गरें र विश्वास र अविश्वास दुबैलाई स्थगित गरें।
जब यो आइपुग्यो मैले यसलाई तुरुन्तै खोलिदिएँ र आफैलाई जोड दिएँ। ती दिनहरूमा, धेरैले "बीटा प्रशिक्षण" को बारेमा सुनेका थिए, र अल्फा-ट्रेनिंगमा केही बरु चाखलाग्दो देखिन्थ्यो, यदि रहस्यमय सम्भावना थिएन भने। त्यसैले मैले भव्य छलांग लिएँ र थाटा सत्रमा सुरू गरें। तल ... तल ... फ्रिक्वेन्सीहरू गए जबसम्म मेरो मुटु दौडिन थाल्यो र म अचानक सासको अभावमा बढ्दैछु। आतंक हमला धेरै प्रकारका मेमोरीहरू "राज्य आश्रित" हुन्छन्, विशेष गरी ट्रुमास। यो थोरलाइज गरिएको छ कि तिनीहरू निश्चित फ्रिक्वेन्सीहरूमा ईन्कोड हुन्छन् जुन मनले "क्वारेन्टाइनहरू" लाई मानसलाई उच्च नकरात्मक कुनै कुराको पुनः अनुभवबाट बचाउनको लागि। अल्फा-थीटा सीमा दिमागमा दमित सामग्रीको सब भन्दा धनी भण्डार हो, र मैले ठोकर खाएको छु र स्पष्ट रूपमा केही चिन्ताको चिन्ता खोलियो। आफैंले रचना गरेपछि र मेरो मानसिकतालाई आश्वस्त पार्दा कि यो उदासीनताको खतरामा थिएन म फेरि काठीमा फेरि चढ्न र यसलाई अर्को जान दिन्छु।
त्यसपछिको सत्रहरू थोरै भए, कुनै समस्या भएमा। तिनीहरू वास्तविकतामा थिए, बरु रमाईलो र असह्य भ्रमणका कारणले मलाई आराम र स्फूर्ति दिइयो। मैले अर्को दुई वा दुई हप्तासम्म मेरो प्रयोग जारी राखें, गहन प्रभावबाट बेवास्ता गर्दै यसले वास्तवमा मेरो मानसिकतामा पार्दै आएको थियो। अन्तमा, मेरो मनोवृत्ति र समग्र आचरणको क्वान्टम परिवर्तन देख्ने एक साथीले मसँग कुरा गरे। उनीहरू आश्चर्यचकित भए कि मैले के गरिरहेको थिएँ त्यसले मलाई नाटकीय तरिकाले परिवर्तन गरिरहेको थियो: “तपाईं आफैंसँग के गरिरहनु भएको छ - मैले यस्तो पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ…” यो क्षणमा मैले महसुस गरें कि म एकदम हल्का, बढी विश्वस्त, स्पष्ट छु पहिले भन्दा पहिले र वास्तवमा स्वतन्त्र पहिलो पटक डिप्रेसन बाट मेरो मानस यस्तो मुक्ति पहिले कहिल्यै थाहा थिएन। म उत्साहित थिए।
मलाई थाहा थियो म यहाँ केहिमा थिएँ। यहाँ यो उपकरण थियो, प्रयोग गर्न को लागी सरल र अपेक्षाकृत सस्तो, कि म स्वामित्व मा र मेरो व्यक्तिगत सुविधा मा प्रयोग गर्न मा सक्षम थियो। र यो मेरो मानस को लागी अनुप्रयोगहरु थिए मैले अन्वेषण गर्न को लागी शुरू गरेको छैन। सम्भावनाको पूरै नयाँ ब्रह्माण्ड मेरो लागि खोलिएको थियो र म बाध्य छु र यसको सबैभन्दा टाढा पुगे सम्म यसलाई अन्वेषण गर्न कटिबद्ध थिए। म आज पनि त्यो यात्रामा छु।
यद्यपि मैले एभीएसका साथ मेरा लाभहरू परिष्कृत गरें र न्यूरोफीडब्याकसँग चीजहरू कडा गर्न अघि बढें, जसले मलाई अन्तिम स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिएको छ, म संयोजन एकदम शक्तिशाली भएको पाउँछु। केही भर्खरको अनुसन्धानले यो पनि देखायो कि एभीएस प्रयोगले आधा घण्टा आवश्यक पर्ने न्युरोफिडब्याक सत्रहरूको संख्या घटाउन सक्छ। र लागतको एक अंशमा। जे होस्, मँ मेरो न्युरोफिडब्याक र एभीएसको साथ समय-समयका अन्य प्रविधिहरूको साथ मेरो अद्भुत कार्य जारी राख्दैछु - सबै बढाइएको र संचयी प्रभावमा।
आज, म निर्विवाद रूपमा स्वतन्त्र छु। आतंककारी हमलाहरू, जुन प्रायः मलाई पीडित गर्छ, हरायो। मैले वजनको पनि एक महत्त्वपूर्ण अंश गुमाएको छु - सायद 30० lbs को आसपास। मसँग अब धेरै ऊर्जा र आसीन हुन आसीन छ। म तालको चारै तिर miles माइल दौडिन्छ (वर्षा वा चम्किन्छ) बिहान :3:०० बजे हप्ताको केही दिनको आशा गर्दछु जब म रेल तौल गर्छु। म टेनिस, कयाक, साइकल, क्याम्प, हाइक, ब्याकप्याक, काठ काट्ने पनि गर्दछु (म मिनेसोटाबाट हुँ - मसँग एउटा केबिन छ जुन दाउराको साथ तातो हुन्छ), शरीर निर्माण र रक क्लाइम्ब। म जाडोमा XC स्की र हिउँमा पनि। यसभन्दा पहिले, मैले हप्तामा एक वा दुई पटक जिममा फोर्स गर्नुपर्‍यो - र त्यसबेला पनि, असंगत। त्यो बाहेक मैले धेरै टिभी देखेँ। अब म शारीरिक गतिविधिमा फस्टाउँछु। यो मेरो लागि ठूलो रमाईलो छ। म एकदम फिट छु यो सहज महसुस हुन्छ; जुनूनी छैन। इमानदार म मेरो जागिरमा कडा मेहनत गर्दछु, जुन मलाई मनपर्दछ (EEG स्पेक्ट्रमको यूएस / क्यानाडाली मध्यपश्चिमी क्षेत्रीय प्रतिनिधि - न्यूरोफीडब्याकमा विश्व नेता), केही पोषण सल्लाह दिन्छु र सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक रूपमा पूर्ण जीवन बिताउँछु। म मेरो आहार र पूरकको साथ पनि धेरै सजिलो हुन्छ। मेरो स्वास्थ्य र प्रतिरक्षा प्रणाली शानदार छ। सबै अविश्वसनीय उर्जा जुन एक समय केवल अस्तित्वमा आएको थियो अब अन्य चीजहरू पूरा गर्न अब स्वतन्त्र छ (अन्तमा अन्तिममा)।
DAVID लाई मेरो परिचय भएको लगत्तै करीव। बर्ष भयो। मैले अरु धेरैलाई देखेको छु, विभिन्न समस्याका साथ नाटकीय रूपमा त्यस समयमा तपाईको कामबाट फाइदा लिन्छु। मेरो फोकस (मेरो लागि) एभीएस र न्युरोफिडब्याकको साथ अब शिखर प्रदर्शनमा अधिक छ। म नयाँ व्यक्ति हुँ भन्न लोभमा परेको छु, तर वास्तवमा म वास्तवमै धेरै हुँ, म को हुँ भन्दा बढी। मेरो मानवीय क्षमता अब मलाई उपलब्ध छ।
कस्तो राम्रो उपहार।
धन्यवाद, डेभ, तपाईको अद्भुत मेसिन र सबै गुणस्तरीय अनुसन्धान र ईमानदारीको लागि तपाईले यसमा राख्नुभएको छ। तपाइँ बढ्दो वैधताका लागि योग्य हुनुहुन्छ र तपाइँ के गर्नुभयो को लागी प्रशंसा। तपाईको कामको महत्त्व लाई कम गर्न मिल्दैन। धन्यवाद, आंशिक रूपमा, मेरो स्वतन्त्रताको लागि। र तपाईको न्यानो, वफादार, अद्भुत र चलिरहेको मित्रताको लागि धन्यवाद। म यसको सधैं ख्याल राख्छु। "